UFasimba lufuna iqedwe ifomu iZ83 emsebenzini | Isolezwe
UFasimba lufuna iqedwe ifomu iZ83 emsebenzini
Izindaba / 6 December 2018, 09:03am / MHLENGI SHANGASE
UMnuz Isaac Luthuli, iPhini likaNobhala jikelele leYCP
UPHIKO lwentsha lwamaKhomanisi, i-YCL luthi kumele kuqedwe ukusebenziswa kwefomu iZ83 uma kufakwa izicelo zemisebenzi kahulumeni.
UFasimba luthi kumele kufakwe iCV kuphela ngoba imininingwane edingwa yiZ83 isuke ikhona kwiCV.
UMnuz Isaac Luthuli, iPhini likaNobhala jikelele leYCP uthe: “Kumele kufakwe iCV kuphela uma ufuna umsebenzi kahulumeni ngoba kudingeka intsha ihambe amabanga amade iyofuna lawa mafomu. Kwesinye isikhathi kudingeke ukuthi uze upose ngoba noma kudingeke uze ugibele uye kulowo mnyango uyofaka isicelo salowo msebenzi, ekubeni manje kusetshenziswa ubuchwepheshe.”
Usho lokhu nje kusasa kuqala ingqungquthela kazwelonke yeYCL eNyuvesi yaseFort Hare, e-Eastern Cape.
Ingqungquthela kulindeleke ukuthi ivulwe nguNobhala jikelele wamaKhomanisi, uDkt Blade Nzimande.
ULuthuli uthe inkinga yeZ83 ingokunye abazokuphakamisa egqungqutheleni.
UNgqongqoshe weziSebenzi zikaHulumeni nokuPhatha, uNksz Ayanda Dlodlo, usanda kumemezela ukuthi abantu sebezokwazi ukufaka izicelo ngekhompyutha uma befuna umsebenzi kuhulumeni.
Umemezele nokuthi izoqedwa indaba yokufunwa isipiliyoni somsebenzi ezikhaleni ezisemazingeni aphansi kuhulumeni.
ULuthuli uthe bayishayela ihlombe eyokuqedwa kwesipiliyoni, ikakhulukazi entsheni ephothule iziqu ngoba lokhu bekuyivalela ngaphandle.
“Intsha ibisala ngaphandle uma sekumele ithole imisebenzi kuhulumeni ngoba ibifunwa isipiliyoni. Noma kuphasile lokhu kodwa kumele siyilwe indaba yokuthi kube ne-data yamahhala ukuze abantu abasha bakwazi ukufaka izicelo zomsebenzi. Intsha inawo amaselula kodwa i-data iyabiza, ngakho uma ingahlinzekwa nge-data nguhulumeni kungaba lula kakhulu ukuthi ithole imisebenzi,” kusho Luthuli.
Uthe uyazi ukuthi kunentsha engagcina isigxila ezinkundleni zokuxhumana engabe ifuna imisebenzi uma i-data ingase ibe mahhala.
Ukhale ngemfundo yamahhala ezikhungweni zemfundo, wathi noma ikhona kodwa kukhona abangalutholi uxhaso.
“Kumele ibhekisiswe ngoba kunabantu abangayitholi imiphumela yabo ekubeni kukhona imfundo yamahhala. Ayibhekwe indaba yale mfundo ngoba baningi abasakhala, ikakhulu abaneziqu ezibanjiwe ngoba kuthiwe bayakweleta, abangakwazi ukuthola umsebenzi.”
Uthe zonke izikhundla zizobe zibangwa engqungqutheleni kusuka kwesikasihlalo kuya kwesikamgcinimafa.